मैले जिते मात्रै ५ नम्बर क्षेत्रको विकास र समृद्धि सम्भव छ : शिवकुमार मण्डल - Koshi Online
मैले जिते मात्रै ५ नम्बर क्षेत्रको विकास र समृद्धि सम्भव छ : शिवकुमार मण्डल
गरिब, किसान र सर्वहारा वर्गको जनजीविकाको सबालमा खरो रूपले आवाज उठाउँदै आएका माओवादी नेता हुन्, नेपाल सरकारका मन्त्री शिवकुमार मण्डल । गरिब परिवारमा जन्मिएका मण्डल तात्कालीन माओवादीले गरेको १० वर्षे जनयुद्धमा सक्रिय सहभागिता जनाएर पार्टीका विभिन्न कमिटीमा रहेर काम गरिसकेका छन् ।
माओवादी मोरङको इन्चार्जसमेत रहिसकेका उनी हाल नेकपा माओवादी केन्द्रको पोलिटब्युरो सदस्यसमेत हुन् । साबिक गोविन्दपुर गाविस घर भएका मण्डल ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा साबिकको क्षेत्र नम्बर ४ र हालको क्षेत्र नम्बर ५ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गयानन्द मण्डललाई ८ मतले पराजित गरेर जिल्लामा माओवादीको शाख जोगाएर चर्चामा आएका हुन् ।
उनी संविधानसभा र रूपान्तरित सांसदमा पनि सर्वाहारा वर्गकै सबाल जोडदार रूपमा उठाएर चर्चामै रहे । आगामी मंसिर २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सोही क्षेत्रबाट उनले उम्मेदवारी दिएका छन् । उनको भिडन्त कांग्रेस नेता अमृत अर्यालसँग हुँदैछ ।
यसै सेरोफेरोमा रहेर नेता मण्डलसँग कोसी अनलाइनकर्मी किशोर विश्वकर्माले गरेको चुनावी कुराकानी :
तपाईंका चुनावी एजेन्डा के–के छन् ?
मैले मुख्य रूपमा दुईखाले चुनावी एजेन्डा बनाएको छु । पहिलो राष्ट्रियस्तरका र दोस्रो क्षेत्रीयस्तरका । राष्ट्रियस्तरका एजेन्डामा संविधान कार्यान्वयनको दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौं । गठबन्धनले जारी गरेको घोषणापत्रको अक्षरशः पालना गर्ने नै छु । पहिलो त संविधानप्रतिको असन्तुष्टि संशोधनमार्फत् गरिनेछ ।
त्यस्तै, समग्रमा भन्नुपर्दा विकाश निर्माण, शान्ति, सम्मृद्धि र स्थायीत्व नै प्रथामिकताका विषय हुन् । क्षेत्रीयस्तरका योजना भन्नुपर्दा मेरो क्षेत्रभित्रका हुलाकी सडकलाई ग्राभेल गरेर कालोपत्रे गर्ने मेरो प्राथमिकतामा पर्नेछ । त्यसैगरी, उक्त क्षेत्रमा सिँचाइ अभाव भएको ठाउँमा कृषि उत्पादन वृद्धि गराउन सिँचाइ व्यवस्थापनको काम गर्नेछु । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानिको पूर्वाधार विकास गराउने छु ।
मेरै क्षेत्रमा पर्ने विराटनगर जुट मिल अहिले दयनीय अवस्थामा रहेको छ, त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन निर्वाचित हुनेबित्तिकै प्रक्रिया अघि बढाउनेछु । जुट मिलको अहिले भइरहेको खरिद–बिक्री रोकेर राष्ट्रको सम्पत्तिका रूपमा राखिनेछ । त्यस्तै, मेरो क्षेत्रमा रहेको सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि जनता आवास कार्यक्रममार्फत नमूना बस्ती बनाउँछु ।
विराट राजाको दरबार, धनपालथान, रंगेलीको काली मन्दिर, संसारी मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने छ । मुख्य रूपमा विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन पहल गर्नेछु ।
प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई मात्र छ । मोरङबाट जम्मा १२ जना मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनेछन् । प्रदेशसभामा बहुमतले निर्णय गर्ने अवस्था आयो भने त यो सम्भव नहोला नि ?
हेर्नुस्, विराटनगर नेपालकै दोस्रो ठूलो र औद्योगिक नगरी हो । प्रशासनिक हिसाबले विराटनगरमा सबै कार्यालय रहेका छन् । उच्च अदालत पनि यहीं छ । पर्याप्त पूर्वाधार विराटनगरमै छन् । त्यसर्थ विराटनगर नै प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । र, म आफ्नो स्थानबाट यसमा ‘रोल प्ले’ गर्न सक्छु ।
तपाईंलाई मतदाताले किन र केका लागि भोट दिने ? यसअघि निर्वाचित भएपछि त्यो क्षेत्रमा के गर्नुभएको छ ?
मैले राज्यबाट प्राप्त गरेका सबै कुरा सो क्षेत्रको विकासमा लगाएको छु । जनताको हितमा कार्यान्वयन गरेको छु । सांसद विकास कोषमार्फत् प्राप्त बजेट सबै सदुपयोग गरी कार्यान्वयन गरेको छु । बुँदागत रूपमै भन्नुपर्दा उदाहरणस्वरूप मैले गरेका केही काम तपाईंलाइ बताउँछु ।
मोरङ पुरानो सहर रंगेली जुन गाविस थियो, अहिले नगरपालिकामा परिणत भएको छ । मालपोत कार्यालय स्थापित भएको छ । ५ नम्बर क्षेत्रमा मलाई नै किन भोट दिनुपर्छ भन्नुपर्दा त्यहाँ मैले पर्याप्त विकासका काम गरेको छु । त्यसैले भोट मलाई दिनुपर्छ । त्यो मेरो दाबी हो ।
त्यो क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्न ३३ केभिए विद्युत् लाइन सप्लाई हुने भएको छ । मैले पहिले पनि मोरङ–५ बाट निर्वाचन लडेकाले अझ धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि मलाई जनताले भोट दिएर जिताउनुपर्छ भन्ने मेरो दाबी हो ।
अर्को कुरा, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा पनि ठूलो पड्यन्त्र गरिएको छ । मेरो क्षेत्र जहाँ बहुसंख्यक मधेसी, दलित, मुस्लिम तथा किसानको बसोबास रहेको छ, क्षेत्र निर्धारण गर्दा त्यहाँका जनतालाई भेडाबाख्रा ठानेर उक्त क्षेत्रका जनताको भोट पैसाले किन्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता राखेर क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । त्यसर्थ अब त्यहाँका जनता भेडाबाख्रा होइनन् । त्यही साबित गर्न पनि त्यहाँका जनताले मलाई नै भोट दिनुपर्छ ।
चुनाव लड्न कति पैसा ठीक पार्नुभएको छ ?
हेर्नुस्, पैसाले चुनाव जित्ने भए विनोद चौधरी नेपालको राष्ट्रपति हुनेथिए । २१ गते चुनावअघि जसले जे–जे गर्छ, गरोस् । तर, चुनावपछि सबै बिलाएर जानेछन् । तपाईं हेर्नुस् न, क्षेत्र नम्बर ३ का उम्मेदवार सुनील शर्मालाई जसको नोवेल हस्पिटलहो उनले बसमा दिनहुँ बिरामी ओसारिरहेका छन् । जसले जे–जे गर्छन्, गरुन् ।
तर, म त्यसरी खर्च गर्ने पक्षमा छैन । मैले १ लाख खर्च गरें भने करोड खर्च गर्नेहरू छन् । त्यसर्थ राम्रा काम गरेर जनताको मन र मस्तिस्कमा बस्नुपर्छ ।
तपाईंको प्रतिस्पर्धी कांग्रेसबाट अमृत अर्याल हुनुहुन्छ । तपाईंहरू मिल्ने साथी पनि हो । चुनावी भिडन्त कस्तो लागिरहेको छ ?
एउटा कुरा– नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतका प्रधानमन्त्री गला मिल्नुहुन्छ । त्यसो भए के साथी हुन भने हाम्रो सीमा छाडिदिने त ? सीमा मिच्न दिने त ? अवश्य पनि हैन । मैदानमा आएपछि आफ्नो लाइन क्लियर हुन्छ । अरूबेला साथीभाइ हो, चुनावी प्रतिस्पर्धामा आइसकेपछि एजेन्डा, सबाल र विचारको कुरा आउँछ, जुन म सँग छ । तैपनि, जनता जर्ज हुन् । उहाँहरूले जस्तो परिणाम दिनुहुन्छ, म सहज रूपले स्वीकार्छु ।